I-Dean neNhloko entsha e-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences, uSolwazi Fhatuwani Mudau.
I-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences (i-SAEES) ineDini neNHloko entsha, uSolwazi Fhatuwani Nixwell Mudau, ongungoti owaziwa ngamangwevu kwezamabhizinisi nakwezemfundo njengososayensi wezokulima nokuphatha izingadi.
UMudau udabuka eLimpopo lapho enza khona iziqu ze-Bachelor of Science kwezoLimo e-University of Venda, egxile kwisayensi yezithombo, ekhuthazwa ezolimo esifundeni esivundile azalelwa kusona. Wayesekilasini lezitshudeni eziyisithupha vo, elaligxile emikhakheni ehlukene yezolimo.
Ngemva kokuqeda iziqu, uSolwazi Godwin Mchau wase-University of California, e-Berkeley, eMelika, owayekade eyiDini e-University of Venda futhi esebenza e-University of Stellenbosch wacebisa uMudau ukuthi enze iziqu zeMastazi kweze-Horticulture e-Stellenbosch.
Ucwaningo lwakhe lwe-MSc lwabheka izinga lezithelo zamawolintshi nolamula, elulekwa wuSolwazi Etienne Rabe noSolwazi Karen Theron.
UMudau wasebenza e-Vista, ngaleso sikhathi wabhalisela iziqu zobudokotela e-University of Pretoria (e-UP) lapho acelwa khona ukuthi enze ucwaningo ngetiye lasendle (i- Athrixia phylicoides). Lwalunqabile ulwazi ukuthi angalisabalalisa kanjani itiye, kanti ukuze abe seduze nalapho kuhlolwa ucwaningo khona, uMudau waya e-University of Venda. Ngenkathi enza iziqu zobudokotela, washadelwa, wabe eseya e-University of Limpopo (e-UL).
E-UL uMudau wayekhona kusungulwa i-Limpopo Agro-Food Technology Station (i-LATS) eyasungulelwa ukuphucula ukwenza umkhiqizo wesivuno yizinkampani ezincane. UMudau wenza lo msebenzi wobuchule iminyaka emibili, washicilela amaphepha ocwaningo amaningi ngaphambi kokuthi akhushulelwe ekubeni ngusolwazi.
Wabe eseya kosebenza e-Industrial Development Corporation (e-IDC), enza umsebenzi womkhiqizo wesivuno nezolimo ne-Health Unit ne-Pharmaceuticals Strategic Business Unit. Ukusuka ekufundiseni ayokwenza umsebenzi wamabhizinisi kwenza ukuthi abhalisele i-Master of Business Leadership (i-MBL) e-Graduate School of Business Leadership (e-SBL) e-University of South Africa (e-UNISA).
Ngemva kweminyaka emihlanu e-IDC, esenezingane ezimbili, uMudau waya e-UNISA wafika nonyawo olusha lokwenza izinto oluhlanganisa ibhizinisi nezemfundo. Waqedela i-MBL, okwamenza wakwazi ukuqonda kangcono izinto ezithinta ezobuholi, ezamasu, ezezimali zezinkampani, ezakwandabazabantu nezokuxhaswa ngemali, konke okuyisisekelo sempumelelo sazo zonke izinhlangano.
Ngemva konyaka ese-UNISA, kwavuleka isikhala sikaSihlalo womNyango wezoLimo nezeMpilo yezoLimo, kwathi ekholwa ngukuthi uma ‘uma ungafuni ukuphatha, ungagcina uphethwe kabi’ noma ‘uma ungafuni ukuhola, ungazithola usuholwa kabi’ uMudau wasithatha lesi sikhundla asihola iminyaka engaphezu kweyisithupha. Kulo msebenzi wayebheke umnyango omkhulu owengamele yonke imikhakha yezolimo.
E-UNISA, uMudau waba yiPhini le-Dean ePhezulu, waba ngumQondisi weSikole sezoLimo nezeSayensi yezeMpilo izinyanga ezinhlanu ngaphambi kokuthi aye e-UKZN. Ungusosayensi onezinga C ngokwe-National Research Foundation.
UMudau wagqugquzelwa yigama le-UKZN ukuze eze khona njengoba ingenye yamanyuvesi aphambili kwezezolimo ezweni lonke.
Kulo msebenzi omusha, ufisa ukuthuthukisa umsebenzi weSikole kwezokucwaninga, ukufundisa nokufunda, ukusebenzisana nomphakathi nezindlela zokuphatha ezinhle kakhulu. Uthanda kakhulu ukulumbanisa ukufundisa nokufunda nokusebenzisana nomphakathi ukuze kube noshintsho emphakathini. Ukholwa wukuthi ukuba mandla kwakhe ezindabeni zokuphatha kuzosisa isiKole kanti iqhaza lobuchule bokuphatha ulibona limqoka.
UMudau uqhubekile nomsebenzi wakhe wetiye lasendle, kusukela ekukhiqizweni kwalo kuze kufinyelele ezingeni lalo nasekucwaningeni amakhemikhali akulona, okuyindima ashicilele amaphepha ocwaningo kakhulu kuyona. Into enkulu ayizuzile ocwaningweni lwakhe kube ngukubona okokuqala ngqa i-flavonoid etiyeni lasendle.
UMudau uthole imiklomelo eminingi eminingi, kuyona okubalwa i-UNISA Chancellor Prize ngobuchule ocwaningweni, amaphepha ocwaningo avelele amahlanu eMnyangweni wezoLimo nezokuThuthukiswa kweziNdawo zasemaKhaya e-Gauteng, nenkomishi engumantuntanendishi ye-Combined Congress. Wafinyelela kowamanqamu emiklomelweni ye-National Science and Technology Forum nomklomelo i-New Generation of Academics Programme Bio Sciences.
UMudau uzoba kwi-American Society of Horticultural Sciences Outstanding Researcher Award Committee iminyaka emithathu, kanti uyilungu le-South African Society for Horticultural Sciences.